Iitattoo ezithandekayo ezincinci, xa ubungakanani bungena ngxaki | Ukuzoba
Ngolu khetho lweetattoos ezintle zincinci Kuboniswa ukuba ubungakanani, xa sithetha nge-inki, amaxesha amaninzi ayinamsebenzi, Kwaye sinako ukufezekisa uyilo olunomtsalane ngobungakanani be mini.
Nokuba zilula, zichaziwe, kumnyama namhlophe okanye ngokuthinta umbala, apha ngezantsi uzakufumana uninzi lweembono zokufumana tattoo efanelekileyo, kunye neengcebiso ezimbalwa zokugcina engqondweni. Funda ukuze ufumane!
1 Iingcebiso ngetattoo yakho ukuba igqibelele
1.2 Indawo eza kwenziwa umvambo
2 Ixabisa malini iitattoos ezincinci?
3 Izimvo zeetattoos ezipholileyo
3.1 Iitattoos ezincinci ze-origami
3.2 I tattoo eneenkcukacha
3.3 Iitattoo zezilwanyana
3.4 Ukutyala iiTattoos
3.5 Iitattoo zenkwenkwezi
3.6 Iitattoos ngokuchukumisa i-watercolor
3.7 Amagama kunye namabinzana tattoos
3.8 Iitattoo zeminwe
Iingcebiso ngetattoo yakho ukuba igqibelele
Ngaphambi kokukunika uninzi lweembono esizilungisileyo, makhe sithethe ngazo ezinye iingcebiso eziluncedo ukugcina engqondweni kolu hlobo lweetattoos:
Ngokwendalo, Njengoko sithetha ngetattoos ezincinci, ubungakanani yenye yezona zinto zibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ngaphambi kokuthatha inyathelo elikhulu.. Kuyacetyiswa ukuba uxoxe ngayo nomculi wakho we tattoo, njengoko eya kwazi ngokuqinisekileyo ukuba indawo iyabhalwa, ukuba uyilo lunokulinganiswa…. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba:
Ezinye uyilo zinokuhamba ukusuka kwinto enkulu ukuya kwezincinci ngokulula (umzekelo, abantu besizwe). Abanye abavumi ukuba kuncinci okanye baneziphumo ezibi (umzekelo, iinyani).
Inqanaba leenkcukacha, kwiimeko ezininzi, kufuneka libe lincinci ukuyenza ibonakale intle kwaye kuthintele i-tattoo ekulahlekelweni ziinkcukacha kunye nokuhamba ixesha.
Indawo eza kwenziwa umvambo
Indawo esifuna ukuyifumana kuyo le nto yenye yezinto ekufuneka sizithathele ingqalelo ukuze, okokuqala, umvambo ubulelwe ngokufanelekileyo kwaye, okwesibini, ukuba uhlala ixesha elide kangangoko kunokwenzeka. Lo nto:
Ezona ndawo zibalaseleyo zeetattoos ezincinci ezintle yingalo yangaphambili, indawo engaphakathi yee-biceps, ingalo, i-nape, intamo, emva kwendlebe kunye neqatha.
Kuphephe iindawo ezinkulu kakhulu ezifana ngasemva. Ayizukujongeka nje incinci kunokuba injalo, kodwa inokuyithintela indawo kwindawo elandelayo.
Gcina ukhumbula ukuba iindawo ezinjengezandla kunye neenyawo zinesikhumba esahlukileyo kwaye zisetyenziswa kakhulu, yiyo loo nto Iitatto kwezi ndawo zihlala zithambisa ngokulula.
Ixabisa malini iitattoos ezincinci?
Sele sixoxe ngesi sihloko ngamanye amaxesha kwibhlog, kodwa kufanelekile ukuba sikhumbule oko Iitatto zihlala zinexabiso elincinci. Nangona ekugqibeleni umzobi we tattoo ethatha imizuzu emihlanu kuphela ngetattoo, ixesha elithathwayo ukulungiselela yonke into (i-inki, igumbi, iinaliti, njl. Njl.) Iyafana nesiqwenga esikhulu.
Ixabiso elincinci lingahluka ukusuka kumculi we tattoo kumculi we tattoo. Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka uthelekise ezimbalwa (ngothungelwano lwasentlalweni, kodwa nangokundwendwela iivenkile zazo) kwaye ekugqibeleni ukhethe eyona uyithandayo.
Izimvo zeetattoos ezipholileyo
Ngoku ewe, ngezantsi sinikezela uthotho lwe izimvo zokukukhuthaza kuyilo lwakho olulandelayo.
Iitattoos ezincinci ze-origami
Enye yoyilo olusebenza kakuhle kumaqhekeza amancinci yi-origami. Ubugcisa bephepha lokusonga laseJapan livumela uyilo olucocekileyo kunye nejometri, apho unokongeza amachaphaza ambalwa ombala.
I tattoo eneenkcukacha
Nangona ngaphambi kokuba sicebise ukuba ungakhethi uyilo oluneenkcukacha, inyani kukuba ngamanye amaxesha imigaqo ikho ukutsiba. Ngomculi we tattoo onamava, sinokufezekisa uyilo olunika umbono wokuba uneenkcukacha ngokudlala ngezithunzi, umbono kunye nombala.
Ezinye izilwanyana zibolekisa ngokukodwa ekuphefumleleni iitattoos ezintle ngenxa yesimo sazo. Sithetha ngabagxeki abathandekayo abafana neeflamingo, iindlulamthi, iingonyama, iindlovu, iifudo, imikhomo ...
Nangona zonke izityalo, ezinomgca olula nobuthathaka, zisebenza kakuhle kakhulu kwiitattoos ezincinci, inyani kukuba izityalo zasendle ziyaziboleka ngokukodwa. Izityalo ezibhityileyo nezithambileyo ezinje ngee-violets, i-lavender okanye i-thyme zintle kakhulu kulwakhiwo oluncinci.
Nangona inkwenkwezi ye-nautical ipholile kakhulu nokuba ingakanani na ubungakanani bayo, kuba umvambo omncinci ngokwenyani yeyona nto ikhethekileyo. Inhle, intle kwaye, ngaphezu kwako konke, incinci, unokuninzi onokufumana ukukhuthazeka kuko, nganye inentsomi yayo.
Iitattoos ngokuchukumisa i-watercolor
Iitattoo ezithandekayo ezintle azihambelani nombala, kwaye i-watercolor, kunye neethoni ezinje ezithulisiweyo kunye nokuncamathisela, zilungele uyilo oluhle nje. Dibanisa umbala kunye nezinye izinto ezinje ngeentsiba, iinyanga, amaza ...
Amagama kunye namabinzana tattoos
Olunye loyilo olunokwenzeka kolu hlobo lweetatto zezi zibandakanya amagama okanye amabinzana (ngokucacileyo le yokugqibela yoyilo olukhulu). Iqhinga lokwenyani ayikokukhetha igama elilungileyo okanye ibinzana, kodwa nokwazi ukuba ukhetha ifonti yeleta.
Kulungile, besesikuxelele ngaphambili ukuba ukwenza iminwe yakho ibingumbono olungileyo, kodwa ukuba ufuna isiqwenga apho ewe okanye ewe, khetha icandelo eliphezulu leminwe, apho uyilo kunokwenzeka ukuba luhlale ixesha elide.
Siyathemba ukuba sikunike izimvo ezininzi ngekamva lakho elihle. Sitshele ukuba unayo nayiphi na izimvo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iitattoo ezithandekayo ezincinci, xa ubukhulu bungenamsebenzi
I-Pinocchio tattoo, ukuthanda ukwazi kunye nokuphefumlelwa kwale popopi